ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ခွန်မြလှိုင်ရဲ့ ပထမဆုံးများ
မတန်ခူးက Tag ထားပြီး မလေးက လာချောင်းတယ်ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့ … အဟင့်.. နောက်ကြောင်းတွေ တယ်ပေါ်တဲ့ တက်ဂ် ပါလားနော်.. ချစ်မ များက တကူးတက မမေ့ မလျော့ တက်ဂ်မှတော့၊ ရေးပြီးပြီလားလို့ လာချောင်းမှတော့ ပြောပါ့မယ်… ခက်တာက (အဟဲ မတန်ခူးလို စကားလုံး သုံးကြည့်တာ) တခုမှ မမေ့ အတိအကျ အသံဖမ်း၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ထားသလို အကုန် မှတ်မိနေတာ..
မူကြို မတက်ဖြစ်ဘူး.. ကျောင်းကို နေရမှလို့ ပူဆာလွန်းလို့ ၄နှစ်နဲ့ သူငယ်တန်း တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းလေးက အိမ်နားက ကျောင်းပါ။ တစ်ရက်ကို ၂ချိန် သင်တဲ့ ကျောင်းမို့ မနက်ခင်း တသုတ်၊ နေ့ခင်း တသုတ်၊ ညနေတသုတ် အိမ်ရှေ့က ဖြတ်သွား ကြတဲ့ အဖြူအစိမ်း တွေကို မြင်ပြီး ကျောင်း တက်ချင်လွန်းလို့ နေမရအောင် ပူဆာ တာနဲ့ ကျောင်းဖွင့်ပြီး ၃လ အကြာ မှ ကျောင်းအပ်လဲ ဖောင် ပိတ် ပြီးတဲ့အချိန် မိဘတွေက ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်မာရီယာ ကို သွားတွေ့၊ အကျိုးအကြောင်း ပြော၊ အပျော် သဘောပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းပေး နေပါလို့ တောင်းပန် နေတုန်း ကိုယ်က ကျောင်းစိမ်း ဂါဝန်လေး ၀တ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီး ရုံးခန်းကို တစ်ယောက်တည်း နောက်က လိုက်လာပါရောလား… ဒါနဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးလဲ အခြေအနေ သဘောပေါက်ပြီး ကလေး စိတ်ချမ်းသာအောင် ဆိုပြီး ကျောင်း အပ် လက်ခံ ပေးပါတယ်။ အမယ်.. ၀င်ခွင့် အင်တာဗျူးသေးသဗျ.. သမီးက ကျောင်းစိမ်းဂါဝန်လေးနဲ့ လှလိုက်တာ ဆိုတော့ ၄နှစ်သမီး ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကားက “ လှမှာပေါ့ စကော့ဈေးက ၀ယ်လာ တာလေ.. ၁၅၀တောင် ပေးရတယ်တဲ့” အဟိ အဲလို နှုတ်သွက် တာပေါ့.. ၈၅ ခုနှစ်က ဈေးနှုံးလေ။ သြော် သမီးက စကော့ဈေးတောင် သိနေပါလား.. ကျောင်းတက် ရင် စာတွေ ကျက်ရမှာနော် လို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ပြောတော့ သမီးက ခု သူငယ်တန်း ဖတ်စာ အကုန် ရနေပြီ ပထမတန်းကို ကျော် တက်လို့ ရမလားလို့ ပြန်မေးလို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးလဲ လက်ဖျား ကို ခါရော.. အိမ်ဘေးနားက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ စာအော်ကျက်တာ နားထောင်ပြီး ကျောင်း ၀င်ခွင့် အပ်တဲ့နေ့ပဲ သူငယ်တန်းကို နှုတ်ဖြေ အောင်ခဲ့တယ်။ ကကြီးခခွေး ရေးတတ် သေးဘူးနော်။
အိမ်နားလေးက ကျောင်းလေးပါ။ ၃မိနစ် လမ်းလျှောက်ရင် ရောက်ပေါ့။ ဖဆပလ ခေတ်က အောင် မေတ္တာ လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလေးကို မဆလ ခေတ်မှာ ပြည်သူပိုင် သိမ်းပြီး အစိုးရ အလယ် တန်း ကျောင်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မြို့နယ် အတွင်း အောင်ချက် အကောင်းဆုံး ဆုကို နှစ်စဉ် အမြဲ ရခဲ့ ရနေဆဲ ကျောင်းလေးပါ။ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် လက်ထက် CPR စနစ်လို့ ခေါ်တဲ့ မအောင်မချင်း မော် ဒရေရှင်း ပညာရေး စနစ်ကြောင့် “ငါတို့ စာမကျက်လဲ အချိန်တန်ရင် အောင်မှာပါ။ ဆရာတွေ ငါတို့ ကို စာမေးပွဲ ချလို့မှ မရဘဲ” ဆိုပြီး လူပါးဝ လာတဲ့ ကလေးတွေ စာမလုပ်တော့လို့ စာညံ့ကုန်လို့ စနေ တနင်္ဂနွေ နေ့တွေပါ ကျောင်းချိန်ခေါ်ပြီး တကျောင်းလုံးက ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကိုယ့်စရိတ် ကိုယ်စိုက် ကျောင်းဖွင့် စာသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းလေးပါ။ အစဉ်အဆက် ဆရာ ဆရာမ များရဲ့ မေတ္တာ စေတနာက တော့ တကယ်ကို လက်ဖျား ခါလောက် ပါတယ်။ သူတို့ကြောင့်လဲ ကျွန်မ စိတ်ကောင်းလေး နည်းနည်း ရှိနေ တယ်လို့ ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ် :) ကျောင်းလေးရဲ့ ခုလက်ရှိ နာမည်က (မပြောပြဘူး)
ဒေါ်တင်ညိုတဲ့။ စည်းကမ်းကြီး စနစ်ကြီးတဲ့ လူပု စိတ်ရှည် ဆရာမပေါ့။ စာသင် တော်လား မတော် လား မွေးထားတဲ့ သားသမီးတွေ အားလုံး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်က ဆရာမ၊ အင်ဂျင်နီယာ စသဖြင့် ထွန်းထွန်း ပေါက်ပေါက် တွေချည့်ပါပဲ။ တပည့်တွေလဲ ထွန်းပေါက် အောင်မြင်တာ များပါတယ်။ အသားညိုညို အညာသူရုပ်နဲ့ ရှေးဆံထုံး နောက်တွဲ ထုံးလေ့ ရှိတယ်။ သူနေတာ ကိုယ့်အိမ်နဲ့ ကျောချင်းကပ်ပဲလေ။ အနှစ် အစိတ်ကျော် အိမ်နီးချင်းနဲ့ ပထမဆုံး ဆရာမမို့ အတွင်းသိ အစင်းသိ။
ခက်ကပြီ။ သူငယ်တန်း တုန်းက အရမ်းပျော်ပြီး စာကြမ်းပိုး လုပ်နေလို့ သူငယ်ချင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပထမတန်းမှာ စခင်ပြီး ဆယ်တန်းအထိ တွဲဖြစ်ခဲ့တာ မြသီတာ တဲ့။ လူတိုင်းက ကျွန်မတို့ နှစ် ယောက်ကို ညီအမ ထင်ကြတယ်။ ရုပ်ဆင်ပြီး အရပ်ပဲ ကွာတာ။
ယောက်ျားမိန်းမ တွဲထားတဲ့ ကျောင်းချည့် နေခဲ့ရပေမယ့် “ မိန်းကလေး ပီသ စမ်းပါ။ မိန်းမက မိန်းမ လိုနေစမ်းပါ” စတဲ့ စကားများကြောင့် အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ “မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ဘာကွာလဲ သူတို့ လုပ်တတ်သမျှ မိန်းမက အကုန်လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ ယောက်ျားတွေသာ မိန်းမ တွေလို ဗိုက်ကြီးပြီး ကလေးမွေးလို့ မရတာ” လို့ ပြန်ကြိမ်း တတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ယောက်ျားတွေကို ပြိုင်ဖက်လိုပဲ သဘော ထား တတ်ခဲ့လို့ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်း မရှိခဲ့ဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ရှစ်တန်း ရောက်မှ အတန်းထဲက လက်လက်ထအောင် ဆော့ဖော်ဆော့ဖက်၊ တေဖော်တေဖက် ကြောင်ချေး၊ ခွေးဖင်၊ မာမီလှိုင်၊ မာမီ ကြိုင် (အဟိ .. မေတ္တာပို့ကြတော့မှာပဲ) စတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ရလာခဲ့ပါတယ်။ ခုခေတ် ရှစ်တန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ဘယ်စတိုင် ချိုးလဲတော့ မသိ။ ကျွန်မတို့ ကတော့ စာသင်ခန်းထဲ ခုံ တွေကြား ပတ်ပြေးပါတယ်။ ပါဆယ်ဂိမ်း ခိုးဆော့ပါတယ်။ ဖတ်စာအုပ်တွေ လှန်ပြီး စာမျက်နှာ နံပါတ် ကြည့်လို့ ဂဏန်းကြီးသူက ငယ်သူကို နဖူးတောက်ပါတယ်။ သြော် သူတို့ထဲက ခွေးဖင် ဆိုတာ တခြားသူ ဟုတ်ပါရိုးလား.. ခု နာမည်ကျော် တနိုင်ငံလုံး သိတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ အဆိုတော် တစ် ယောက် ပေါ့။ တမြက်စည်းရောင်းတမ်း ကစားရာမှာ ဟော့ဒီက မောင်ခိုင်မြဲ တံမြက်စည်း ဆိုပြီး ကြမ်းပြင်နဲ့ ရိုက်ပြတာ စာသင်ခန်းထဲက တံမြက်စည်းတွေ ကျိုးကုန်လို့ တသင်းလုံး စိုက်လျော် လိုက်ရဖူးတယ်။
မိဘတွေက ကျောင်းစာကလွဲလို့ တခြားစာ မဖတ်ရ တဲ့အထဲ ကျွန်မလဲ အပါ။ ခိုးဖတ်ဖူးတဲ့ ပထမဆုံး စာအုပ်က ဂျာနယ်ကျော် မမလေးရဲ့ “သွေး”
၀န်ကြီးတို့အိမ် (ကလေးဘ၀ တည်းက ကဗျာကို ပြောင်ဆိုတတ်တာ အကျင့်ပါ :P )
အသက် မပြည့်ဘဲ ကျောင်းတက်တဲ့အပြင် ကျောင်းအပ် သုံးလ နောက်ကျ လို့ သူများတွေ ညအခါ လသာသာ သင်နေချိန်မှာ ကကြီး၊ ခခွေး စရေး နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ဒီနှစ်တော့ အပျော်ပါ လို့ တခြား အတန်းသား မိဘတွေ ပြောတာကို မခံချင်လို့ ကြိုးစားလိုက်တာ အဲဒီ သူငယ်တန်းကိုပဲ တန်းချုပ် တတိယနဲ့ ၃ဘာသာ ဂုဏ်ထူး ၂ဆုလုံး ရခဲ့တယ်။
၇တန်းမှာ ကျောင်းပြောင်းတော့ အဖေကို အကြိုအပို့ မလုပ်ခိုင်းဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဘတ်စ်ကား စီးမယ် ဆိုပြီး စီးခဲ့တာ… ပထမ တပတ်လုံးတော့ ဘတ်စ်ကား မူးတာ ချာလပတ်ကိုလည်လို့… နောက်တော့ ၀ိဓူရ အမတ်လိုလဲ ကားမြီးမှာ စီးတတ်သွားတယ်။
(((တိုင်းပြည်ကို ရှေ့ဆောင်ကာ တို့ ကျောင်းသားတွေသည် .. စံနမူနာတင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့ ဖြစ်သည် ... ကမ္ဘာ တ၀ှမ်း မှာ ဗမာ အစွမ်းသာ မော်ကွန်း တင်ပါမည်။ တို့တတွေ သွေးစည်းမည် ... ဗမာပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သည် ရာဇ၀င် တွင်လောက်ပေသည်... တော်လှန်ရာ တွင် ရှေ့ ကပင် ဦးထိပ်တည် သက်စွန့် ကြိုးပမ်း ထမ်းရွက် ခဲ့ပေသည်.. ကိုယ်ကျိုးအတွက်ဆို မငဲ့ကွက် နိုင်ပါသည်.. ကျောင်းသားများရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ထမ်းရွက်မည်... ညီညီညာညာ တို့ အောင်လံ တော် အောက်ကို ၀င်ကာ အတည်.. တို့ကျောင်းသားတွေ ညီကြမည်... ဟေ့...))) (အဘိုး ဆိုလေ့ ရှိတဲ့ သီချင်း ပါ။ သူတို့ခေတ်က တက္ကသိုလ် ဆိုတာ တယ် ကိန်းခန်းကြီး ဆိုပဲ ဒီတက္ကသိုလ် ကျောင်း သား တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် တပ်မတော်ကြီး ပေါ်လာပြီး လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တယ်လို့ အဘိုးရဲ့ အိပ်ရာဝင် သမိုင်းတွေက ပြောပြတယ်။) ခုသီချင်းက ခုခေတ်မှာ ဆိုမိရင် ဘာဖြစ်မလဲ မသိဘူးဗျ.. တကယ်ကတော့ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် မျိုးစေ့ ချပေးခဲ့တဲ့ ရှေးသီချင်းပါ။ မိဘက ကြပ် လိုက် တာမှ ကက်ဆက်၊ တီဗီတောင် ၀ယ်မပေး ထားလို့ ကိုးတန်းမှာ မြန်မာစာအချိန် လျှပ်တပြက် စာစီ စာကုံး ပြိုင်ပွဲမှာ အနှစ်သက်ဆုံး သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ရေးခိုင်းတော့ အစအဆုံး မှတ်မိတဲ့ တခြား သီချင်း မရှိလို့ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ရေးခဲ့ ရတယ်။ ပထမ ရသဗျ။
သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် သိပ်ဝေးတယ်။ ပထမဆုံး ၀ယ်ဖူးတာ အယ်လ်လွန်းဝါရဲ့ အချစ်မျက်ဝန်း။ ကိုယ်နားထောင်ဖို့ ၀ယ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဆောင် အဖြစ် ၀ယ်ပေးခိုင်းလို့ :P
အဟိ .. မတန်ခူး အတိုင်းပဲ (အမှန်အတိုင်းပြောရရင်… ခုထိ တခါမှ မ၀ယ်ဖူးဘူး… အိမ်က အမျိုးသား ၀ယ်တာတွေပဲ ကြည့်တာ….)
ဖယ်မလီယာ ဦးဇကွဲ … ညွန့်ဝင်း ၂ကိုယ်ခွဲနဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ပါတယ်။ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ သံပေါက် ကဗျာလေးတွေ ဆိုတာကို ကြိုက်လွန်းလို့ခုထိမှတ်မိနေတုန်း…
၂၀၀၅.. (အဲဒီရီးစားနဲ့ ပဲ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တာပေါ့).. တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ကျောင်းပြေးလွန်းတဲ့ ကျွန်မကို ကောလဟလ သတင်းတွေ လွှင့်ကြ လွန်းလို့ ကျွန်မ ရည်းစား ထားဖူး မထားဖူး တ၀ိုင်း ကြေး လောင်းပြီး ၀ိုင်းစုံစမ်း ကြသူတွေ ရှိကြရဲ့။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်တန်း အတန်းပိုင်ရဲ့ သမီးက ကျွန်မရဲ့ တက္ကသိုလ် သင်္ချာ ဆရာမ မို့ သူ့အိမ်မှာ ကျူရှင်တက်ရင်း စုံစမ်းတော့ ပြီးရောပေါ့။ ကျွန်မအကြောင်း အတွင်းသိ တွေက ယောက်ျားလျာလို့ ထင်ကြပြီး မသိသူတွေက ယောက်ျားအစစ် လို့ ထင်ကြတာ အကိုတွေနဲ့ ကြီးခဲ့လို့ ဖြစ်မယ် ထင်ရဲ့။ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်တည်းက သူငယ်ချင်း နဲ့ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၃လ အကြာမှာပဲ လက်ထပ် ခဲ့တယ်။ လွှင့်ချင်ဦးဟဲ့ ကောလဟလ...
ခုထိ တစ်စောင်မှ မရေးဖူး သေးဘူးဆို ယုံလား... (ဒီလောက် ဖုန်းပြောနေတာ.. ရေးဖို့ တောင် မအားဘူး)
ဗိုက်က ဆာဆာနဲ့ guide က ပြန်အလာ
ဆယ်တန်းဂိုက် သင်ပြီး ညဘက် ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လာတာ အိမ်က ကျွန်မ စားဖို့ ညစာ ချန်မထားလို့ စိတ်နာနာနဲ့ ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာပေါ့။
အဘိုးနေတဲ့ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြို့ လေးပေါ့… တမာပင်တွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ … သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ အညာသူလေးတွေရှိတယ်… ပြီးတော့…ကျွန်မ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ပါးစပ် ပိတ်နေတဲ့ ခြင်္သေ့ကြီး ရှိတယ်။ ငယ်ငယ်က ဂုတ်ခွ စီးခဲ့တဲ့ စီးတော် ခြင်္သေ့ကြီးပေါ့။
ထိုင်းနိုင်ငံ... ဒီမိုကရေစီ ရလိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံလေးပေါ့။ စစ်အာဏာရှင် နိုင်ငံမှာ နေထိုင် ကြီးပြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေမခိုင်တဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာနေ၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခိုင်တဲ့ နိုင်ငံအကြောင်း ပညာသင်၊ ကွန်မြူနစ် နိုင်ငံကို ခဏခဏ အလည် ခရီးထွက်... အင်းးးး နောက်ထပ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားရင် ကောင်းမလဲ...
၉နှစ်သမီးတုန်းက ပထမဆုံး ဆေးလိပ် ခိုးဖွာတာ မီးခိုးသီးလို့ အဲဒီတည်းက ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးလိပ်ကို အဝေးဆုံး ရှောင်ခဲ့တာ.. အရက်လား.. ဂန္ဓာလရာဇ် သွေးပီပီ ဆယ့်လေးနှစ် သမီးမှာ အရက် သောက် တတ်တာ မဆန်း ပါဘူးနော့။ တရုတ်နှစ်ကူးမှာ အဘိုး ကိုယ်တိုင် စပ်ထားတဲ့ တရုတ် ဆေးမြစ် အမျိုး ၂၀ကျော် စိမ်ထားတဲ့ ဘလက်လေဘယ် ပါပဲ။ လေးဘက်နာ ရောဂါကို ၆နှစ်တိတိ ဆေးကု ယူရချိန်မှာ အဲ့ဒီ အရက် သောက်ရတော့ သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းပြီး အကိုက်အခဲ သက် သာ လို့ ခွက်ပုန်း ဖြစ်သွား တာလေ… အနှစ် ၇၀ တိတိ မပြတ်တမ်း အရက်သောက်တဲ့ အဘိုးကြောင့် alcohol resistant gene ရသွားလိုက်တာ… Newyear party တစ်ခုမှာ မှောက်အောင် တိုက်မယ် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မှောက်သွားပြီး ကိုယ်ကတော့ ကြွက်တွင်းဘွဲ့ ရခဲ့ဖူးတယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင် ဆရာတော်ကြီး က အရက်ကို ရာသက်ပန် အလှူခံလို့ လှူပြီးမှ အရက် ပြတ်သွား တော့ တယ်။ ခုများတော့ အရက်ကို လုံးဝ လက်ရှောင်…
၇နှစ်သမီးမှာ ကျည်မပါဘဲ ပစ်တာ မောင်းပြန် ရိုင်ဖယ်.. ကျည်ဆံ နဲ့ ပစ်ဖူးတာက အမ်အေဖိုး.. (သေနတ်က အစစ်လား အတုလား ဆိုတာတော့ ပြောပြဘူး အဟိ.. လူအထင်ကြီး ခံရ နည်းလား) ကွမ်းသီးပင် တစ်ပင်ကနေ တစ်ပင်ကို ခုန်ကူးနေတဲ့ ရှဉ့်ကို ပစ်တာ ထိသဗျ.. တွတ်ပီလိုပဲ.. သူငြိမ်နေရင် ထိချင်မှ ထိမှာ.. ခုတော့ သနားစရာလေးတွေ ဖြစ်ကုန်ရော..
နေဘုန်းလတ် နဲ့က ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းမို့ နဂိုတည်းက သူ့စာတွေနဲ့ ရင်းနှီး ပြီးသားပါ။ သူဘလော့ရေးတော့မှ ကိုယ်က ဘလော့ ဆိုတာကို စသိတာမို့…
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 5:19 AM
ဒီက တကယ်များရေးထားပြီလားလို့ … သေချာရေးမယ်ဆိုလို့ကျေနပ်သွားပြီ… စောင့်နေမယ်လှိုင်ရေ…
ညီမရေ..ပထမဆုံးတွေ ၀ိုင်းရေးနေကြတာ ကောင်းပါတယ် .. ကျနော်လည်း ဒီကော်မန့်က ဒီ(၆)လ အတွင်းမှာရေခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးပါ ..ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းစာမရေးဖြစ်တော့ ပေမဲ့ အမြဲတမ်း ဘလော့တော့ ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်။
ရသလေးတွေစုံလင်နေအောင်ရေးတတ်လွန်းလို့တက်ဂ်ရကျိုးနပ်ပါတယ် လှိုင်ရေ… မှတ်ဥာဏ်ကလည်းကောင်းလိုက်တာနော်… ဖတ်သူတောင် မျက်လုံးထဲမြင်တယ်… ဒါကြောင့်လဲ သေးသေးလေးနဲ့ အသက်မပြည့်ပဲ သူငယ်တန်းမှာ ဆုတောင်ရလိုက်သေးတယ်... ခွေးဖင်ဆိုတာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်လား… လှိုင်တို့ နဲ့ ရွယ်တူလောက်ထဲက လိုက်စဉ်းစားကြည့်တာ… ပထမဆုံးဆိုခဲ့ရတဲ့ သီချင်းလေးက တကယ့်မော်ကွန်းဝင်ပဲနော်… လှိုင့်ကဗျာလေးက ချစ်စရာလေး... လှိုင်ချက်တဲ့ ကင်ပွန်းရွက်ချဉ်ရည်လေးကို သောက်ချင်လိုက်တာ… သေနတ်တကယ်ပစ်ဖူးတယ်လား… ဒါကြောင့် ယောင်္ကျားလျာလို့ ထင်ကြတာပဲဖြစ်မယ်… ဒီပို့ စ်လေး ဖတ်ပြီး လှိုင့်ဖိုးဖိုးကို အတူလွမ်းသွားပြီ….
သူက ကိုးနှစ်ထဲက ဆေးလိပ်သောက်တာကိုး..
မလေးကတော့ လက်ဖြောင့်တာမပြောနဲ့ လှိုင်ပြောတဲ့ Flying target ဆိုရင် classic duck hunt game. မှာ ချန်ပီယံပဲ… :D
Well . , that Friend of urs miteb'Min Maw Kon' .. juz guessing by the age & his playful character .. =p